Ama-Amazon angakwazi kanjani ukubeka ama-checker ukufaka umkhankaso wokwenza umsebenzi wakho?
I-Amazon iyinhlangano yokuhweba ephumelelayo futhi eqhubekayo yokuhweba lapho umthengisi ngamunye engakwazi ukuphakamisa imali futhi akhuthaze brand yayo. Inikeza izinzuzo eziningi zebhizinisi le-e-commerce elibapha ngenzuzo enkulu namakhasimende avamile. Wonke umuntu angathuthukisa ibhizinisi lakhe ku-Amazon njengoba kuthatha isikhathi esincane nemizamo - app developers websites. Kodwa-ke, siyini isizathu sokuba khona e-Amazon njengamakhasimende akho angakwazi ukuthola imikhiqizo yakho? Njengoba i-Amazon iyisiteji sokuncintisana kakhulu, udinga ukusebenza kanzima ngaphansi kokuhlelwa kokuhlunga kwakho futhi uthuthukise umkhankaso wokukhangisa onqobayo. Ukuze ulandelele impumelelo yemikhankaso yakho yokwenza kahle nokumaketha, udinga ukuhlola izikhundla zakho zezinga lemikhiqizo ngokuqhubekayo. Uma uthengisa imikhiqizo engaphezu kwemihlanu, kuyoba nzima ukulandelela zonke izikhundla zabo ngesandla. Yingakho kulesi sihloko sizoxoxa ngomhloli osebenzayo we-Amazon usezingeni elingaba nomthelela omkhulu ekusebenzeni kwakho kwe-Amazon. Kodwa ake siqale sicabange ukuthi kungani kubaluleke kangaka ukulandelela ama-product rankings e-Amazon.
Kungani udinga ukulandelela isikhundla sakho somkhiqizo ku-Amazon?
Uma ungakwazi ukubona ukuthi amagama akho angukhiye ahlosiwe nokuthi kanjani imikhiqizo yakho eyenzela yona ekhasini le-Amazon search results, uzokwazi ukuthuthukisa ukuhlelwa kwakho kokufakwa ohlwini futhi ulungise amaphutha akhona. Kumele ufeze izivivinyo zokuhlukanisa futhi unikeze abacwaningi begama elingukhiye ukuthola amagama afanele kakhulu futhi ahlosiwe ekusesheni kwakho. Imigomo yosesho ecacile neyesikhathi eside inenhloso engaphezulu kunezinye futhi ingaba yizinsiza zokubeka izinsiza zamabhizinisi amancane noma asanda kusungulwa. Kodwa-ke, kufanelekile ukuphawula ukuthi amagama abanzi okusesha adonsela ngaphezulu kwethenda kunamagama angaphansi okuncintisana.
Kunengqondo ukukulandelela uma uhlala nsuku zonke, ngesonto onke, noma ngenyanga. Ukwenza ucwaningo njalo, uzodinga isofthiwe e-intanethi ezenzakalelayo njenge-Splitly noma i-AMZInsight. Lezi Amazon zihlanganisa amathuluzi wokuqapha angenza zonke izinsizakalo zokuhlaziya nokucwaninga ngawe ngemuva kwemikhiqizo yakho yelebuli yangasese..
Abanye abathengisi be-intanethi baphazamiseka lapho bebona ukushintshashintsha kwezibalo ze rankings. Nokho, asikho isizathu sokukhathazeka ngakho. Kuvamile kumikhiqizo esanda kuqaliswa. Ngaphezu kwalokho, ukuhlukahluka kuncike ezingeni lakho lokuncintisana le-market niche, ukuthandwa komkhiqizo, isikhathi sonyaka, nezinye izici. Ngenhlanhla, ngokusebenzisa isofthiwe yobuchwepheshe obunjalo, uzothola umbono wokuthi yiliphi izinga eliphakeme lemikhiqizo yakho ngokuhamba kwesikhathi. Inzuzo evelele kakhulu ongayithola kusuka kwesofthiwe yesimo se-intanethi ukuthi ungagubha lapho izikhundla zakho zesikhundla sezikhuphuka futhi uqhubeke usebenza kanzima uma zizinzile. Ngaphezu kwalokho, ungaba usizo uma isigaba sakho sehla.
Ngakho-ke, kubalulekile ukuthola ukulandelela kwegama lakho elingukhiye ngokuzenzakalelayo, ukuze ukwazi ukubona amaphuzu aqinile futhi abuthakathaka emikhankaso yakho yokuthuthukisa kanye nokukhomba ukuthi ulinganisa kanjani lawa noma lawo magama okusesha.
Noma kunjalo, izinga lakho lemikhiqizo akuyona nje imetric ehambisanayo okudingayo ukulandelela njalo, kodwa kukhona nezinye izinto ezibalulekile ezifana nokuthengiswa kwezimoto, i-traffic kanye nezikhathi, ukubuyekezwa nokuningi. Wonke la amamethrikhi ungathola ukusebenzisa okushiwo ngenhla ama-Amazon aphisheke amathuluzi. Njengomthengisi we-intanethi ocebile, udinga ukugcina umbono jikelele kuwo onke amamethrikhi asezingeni elingathinta ngandlela-thile izinga lemikhiqizo yakho ku-Amazon SERP.
Amathuluzi okucwaninga oku-intanethi engiwasebenzise anginikeze imibiko evamile. Kulula kakhulu uma unesithombe sonke sesimo sakho samanje futhi ungaqhathanisa izikhundla zangaphambilini nezamanje.
Ngakho-ke, ngingasho ukuthi ama-Amazon asezingeni labahloli angakwazi ukulondoloza isikhathi sakho futhi anikeze idatha ehambisana kakhulu neyinkimbinkimbi okudingeka usebenze kahle ku-Amazon.